China Pearlescent Aluminium Plastic Panel panel emepụta na suppliers | Chenyu
Agba nke ogwe osisi aluminom nke pearlescent bụ otu ihe ahụ na-agbanwe agba agba eke. Dabere n'ụdị ụcha na akụkụ nlele, a na-enwupụta ọkụ nke ebili mmiri dị iche iche azụ, na-ebute gradients na-agbanwe agbanwe mgbe niile na isi ihe na-acha egwurugwu. Mmalite nke ogwe osisi aluminom-plastik pearlescent bụ ihe na-eme achịcha maka ịchọ ụlọ anyị mma. Agba ndị na -egbu maramara na -agbakwụnye ume na nhazi ụkpụrụ ụlọ yana gbakwunye amara na ụwa anyị.
1. Agba elu na -agbanwe site na mgbanwe nke isi ọkụ na akụkụ nlele;
2. Elu elu gloss, karịa 85%;
3. Ogwe ihe mejupụtara pearlescent aluminom dị mma, ịdịte aka mmetụta, nguzogide mmiri, nkwụsị ezé, nguzogide ọkụ, na nguzogide ihu igwe.
4. Site na mmetụta na -enwu enwu na nke na -egbu maramara, ogwe ihe mejupụtara aluminom na -egbu maramara na -enye echiche dị aghụghọ.
Ọ dabara nke ọma maka ime ụlọ na n'èzí, yinye azụmahịa, mgbasa ozi ngosi, ụlọ ahịa 4S ụgbọ ala na ihe ịchọ mma na ngosi ndị ọzọ na ebe ọha.
Ọ bụghị naanị na -ejigide njiri mara nke ihe akụrụngwa mbụ, kamakwa ọ na -emeri ihe mejupụtara akụrụngwa mbụ ezughi oke, wee nweta ọtụtụ ihe onwunwe dị mma. Dị ka okomoko na ịma mma, ọmarịcha na ịchọ mma; nguzogide ihu igwe, nguzogide corrosion, nguzogide mmetụta, nkwụsị ọkụ, nguzogide mmiri, mkpuchi ụda, mkpuchi ọkụ.
1) Na-eji akụrụngwa kemịkalụ dị elu na teknụzụ iji mesoo elu nke eriri aluminom, na-akpụ ihe nkiri oxide mmanụ aenseụ dị elu n'elu eriri aluminom, ka agba na mkpuchi aluminom wee jikọta ọnụ site na onye na-eme ihe a, ma nwee ezigbo adhesion.
2) Mkpuchi na-anabata igwe nrụpụta ihe nkedo nke ala atọ nke na-arụ ọrụ nke ọma, nke na-arụ ọrụ nkenke na ọnọdụ emechiri emechi na enweghị ntụ, nke mere na a na-ejikwa oke nke ihe mkpuchi mkpuchi na ịdị mma nke mkpuchi ahụ; a na -ekewa oven n'ime mpaghara anọ iji chịkwaa ọnọdụ okpomọkụ na akpọọ nkụ.
3) Ahịrị mejupụtara ọkụ na-ejikọ ọkụ na-aga n'ihu bụ akụrụngwa bụ isi maka ịkpụpụta kọmpụta mejupụtara aluminom-plastik. Ọrụ ya bụ ime ka ihe aluminom, PE isi ihe na ihe nkiri polymer nwere njikọ chiri anya n'okpuru mmetụta nke oke ọkụ na -aga n'ihu na nrụgide iji mepụta ala dị larịị.
Nke gara aga: Wapụtara usoro mkpuchi mkpuchi aluminom